6-da barnaamij ee jadwalka ugu wanaagsan ee la wadaago ee loogu talagalay Android | Androidsis
Ignacio Sala | 20/05/2021 22:00 | Codsiyada Android
In yar oo aan ka raadinayno Dukaanka Play for codsiyada jadwalka, tirada natiijooyinka ayaa aad u sarreeya oo waxay naga dhigeysaa howl aan macquul aheyn in la xusho taas oo noqon karta tan ugu fiican baahideena, gaar ahaan haddii aan u baahanahay codsi aan ku maareeyno jadwalka / taariikhda dadka kale, ha ahaato qoys, saaxiibbo ama asxaab shaqo.
Laga soo bilaabo Androidsis, waxaan ku abuurnay liis leh 6da codsi ee ugu fiican ee lagu maareeyo jadwalka taariikhda, labadaba la wadaago iyo shaqsi ahaanba. In kasta oo ay run tahay in codsiyada badankood ay lacag la’aan yihiin, haddana waxaan ku soo daray qaar u taagan labadaba shaqadooda iyo qaabkoodaba, in kasta oo la bixiyo.
Waxa ugu horreeya ee maskaxda lagu hayo marka la dooranayo mid ka mid ah barnaamijyadan ama wax kale, waa inay tahay inaad u dhigma jadwalka taariikhda Google. Sidan oo kale, waxaan ku badali karnaa codsiga kalandarka annaga oo aan ka baqaynin inaan waayi doono ballamaha aan ku darnay kalandarka.
1 Calendar Google
2 Jadwalka Qoyska
5 Muuqaalka Microsoft
Kalandarka Google waa mid ka mid ah barnaamijyada kalandarka ee la wadaago oo dhammaystiran oo aan ku haysanno bilaash ahaan. Codsigan ayaa ku habboon dhammaan kuwa isticmaala ee doonaya inay xoogga saaraan hal jadwal dhammaan shaqooyinka ama shaqada guriga, si habeysan dad dhowr ah.
Waxay na siisaa noocyo kala duwan oo aragtiyo taariikheed ah: bil, toddobaad iyo maalin (in kasta oo aragtida maalintu aysan ahayn barta ay ku xoog badan tahay). Marka lagu daro Gmail, waan awoodnaa ku dar dhacdo kasta oo la xaqiijiyay kalandarka adigoo hal qasabad ku dhajinaya in aan ku helnay emayl.
Kalandarka Google waxaa ka mid ah kaalandarro gooni ah oo loogu talagalay ciidaha maxalliga iyo kuwa qaran, wuxuu ina tusayaa taariikhda dhalashada xiriirada aan leenahay taariikhda dhalashada. In kasta oo laga soo qaatay Google, barnaamijkan ayaa loo heli karaa soo dejin bilaash ah wuxuuna la jaan qaadayaa dhammaan taleefannada casriga ah ee Android.
Kalandaarka Qoyska, abaabulidda ajandaheena iyo tan qoyskeenna waa mid aad u fudud, raaxo leh iyo, wixii ka sarreeya, oo ah geedi socod degdeg ah. Codsigan waxaa loo qaabeeyey bilow ilaa iyo noqo aalad ay u isticmaalaan xubnaha kala duwan ee qoyska, kooxaha asxaabta, asxaabta ...
Kaliya maahan inay noo ogolaato inaan ku darno ballamaha jadwalka, laakiin sidoo kale way noo ogolaataa ku dar dhacdooyinka, howlaha, xusuusinta iyo xusuusinta, dhammaantoodna waxay ku wada shaqeynayeen koontada Google. Dhammaan dhacdooyinka aan ku taxnay jadwalka ayaa loo heli karaa qoyska oo dhan iyada oo loo marayo aragtiyo kala duwan.
Kalandarka Qoyska ayaa loo heli karaa adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaashSi kastaba ha noqotee, haddii aan dooneyno inaan sida ugu badan uga faa'iideysanno oo aan uga takhalusno xayeysiisyada ku jira arjiga, waa inaan ka faa'iideysanaa toddobaadlaha, rukunka ama sannadlaha ah.
Kalandarka Qoyska - FamCal
Developer: Barnaamijyada Beesoft
TimeTree wuxuu ka mid ahaa codsiyada Google ka xushay Play Store mid ka mid ah barnaamijyadooda ugu fiican ee 2015. In kasta oo dhowr sano laga soo gudbay, soosaarayaasha barnaamijkan bilaashka ah way sii wadeen inay ka shaqeeyaan, ku darista shaqooyin cusub iyo la jaan qaadista naqshadda noocyada cusub ee Android.
Codsigan ayaa na siinaya aragtiyo kala duwan oo taariikheed ah: maalinle, toddobaadle iyo bille. Dhammaan dhacdooyinka jadwalka waxaa la ogeysiinayaa dhammaan xubnaha qoyska, asxaabta, dadka aad taqaan, dadka aad wada shaqeysaan ee arjigu rakibay. Waxay noo ogolaaneysaa inaan sameysano liisaska wax iibsiga iyo xusuusin iyo waliba noo ogolaada inaan u dirno ogeysiis dhamaan xubnaha.
Mid kale oo ka mid ah awooda barnaamijkan ayaa ah inaan maamuli karno dhammaan jadwalka taariikhda ee aan ku abuurnno arjiga kombiyuutarka PC ama Mac adigoo adeegsanaya biraawsar, shaqo uu Google Calendar sidoo kale na siiyo.
TimeTree - Kalandarka Wadaagga ah ee Bilaashka ah
Developer: Waqti, Inc.
Haddii aan raadineyno codsi leh naqshad naqshadeysan oo la mid ah tan ay bixiso Google Calendar, waxaan leenahay Kalandarka DigiCal. DigiCal wuxuu la midoobaa labadaba Kalandarka Google sida Muuqaalka iyo Microsoft Exchange, sidaa darteed wax cudurdaar ah uma lihid inaadan isku dayin.
DigiCal ayaa noo fidisa 7 maalmood si loo abaabulo howlaha: maalin kasta, usbuuc, ajandaha, bisha, bisha qoraalka, liiska iyo sanadka, sidoo kale waxaa ku jira 6 wijitolojiyadood oo leh cabirro iyo howlo kala duwan. Dhamaan adeegsadayaasha doonaya ajandahooda inay dhameystiraan, waxaan ku rakibi karnaa mid ka badan 500.000 jadwalka taariikhda, maalmaha ciidaha, dhacdooyinka isboorti ... ee ay na siiso.
Waxay na siisaa tiro badan oo xulashooyin ah oo lagu maareeyo ballanta jadwalka oo ay ku jiraan hawsha ka mid noqoshadooda, the u xilsaarista dhacdooyinka / howlaha adeegsadayaasha waxaana ka mid ah nidaam deg deg ah oo cinwaan looga soo galo meelaha Google.
Kalandarka DigiCal ayaa loo heli karaa adiga ku soo dejiso bilaash, waxaa ka mid ah xayeysiisyada iyo iibsiga barnaamijka oo noo oggolaanaya inaan ka saarno dhammaan xayeysiisyada dalabka kaliya 4,49 euro.
Haddii aad rabto inaad maamusho labada emayl iyo sharraxaadda ajendahaaga, Muuqaalka ayaa ka mid ah codsiyada ugu dhammaystiran ee macnahaas leh maaddaama ay tahay mid dhan-ka mid ah oo waliba noo oggolaan hel adeegyada kaydinta daruurta ha noqoto Google Drive, Dropbox, Onedrive ...
Muuqaalka loogu talagalay Android wuxuu la jaan qaadayaa dhammaan ballamaha aan ku hayno jadwalka, oo ay ku jiraan dhalashada iyo ciidaha, waa la jaan qaadi karaa Kalandarka Google iyo Microsoft Exchange marka lagu daro jadwalka taariikhda ee aan ku dhignay Muuqaalka oo ay ku jiraan widget si aad ugu dhejiso shaashadda guriga qalabkeenna.
Adoo heysanaya nooc khadka tooska ah ah oo loo maro 'Outlook.com', waxaan ku maamuli karnaa kalandarka, dhacdooyinka la wadaago iyo casuumaadaha si raaxo leh kombiyuutarka. Muuqaalka loogu talagalay Android ayaa loo heli karaa soo dejisan gebi ahaanba bilaash, kuma jiraan xayeysiis mana adeegsado xisaab Microsoft ah.
Haddii aad raadineyso is-dhexgal gebi ahaanba ka duwan kan ay bixiyaan barnaamijyada badankood, waa inaad fiirisaa ZenDay. ZenDay waxay na siisaa a Star Wars-u eg interface, in markii aan ku sii socono waqtiga, ay u dhaqaaqdo una baaba'do dhanka sare ee shaashadda.
ZenDay sidoo kale way noo oggolaanaysaa ku dar howlaha adoo adeegsanaya abka ZenDay: Isku xirka Hawlaha Google, laakiin ma ahan suurtagalnimada in nala tuso labada dhalasho ee xiriirada aan ku keydinay ajendaha iyo ciidaha qaran ama kuwa caalamiga.
Waxaa ku jira laba wijetro oo naga siiya marin u helka waxa ku jira dalabka. ZenDay ayaa loo heli karaa adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaash, oo waxay na siisaa in-app iibsi si loo furo marinka dhammaan howlaha ay na siiso.
ZenDay: Jadwalka, Hawlaha, Waxqabadka
ZenDay: Isku dubarid Hawlaha Google
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » 6 barnaamij ee jadwalka ugu wanaagsan ee la wadaago ee loogu talagalay Android